China Olympic Barbell Standard Weightlifting Barbell 2.2m mpanamboatra sy mpamatsy | Yolanda
Ny fanazaran-tena Barbell dia endrika fampiofanana amin'ny fanoherana. Ny fampiofanana fanoherana dia mampiasa ny hozatrao hanetsehana fanoherana, mazàna mavesatra. Ohatra amin'ny fiofanana amin'ny fanoherana barbell dia ny squats, bench press, barbell row, press press, soroka maty ary curl mba hanonona vitsivitsy. Ny barela dia mamela anao hifindra lanjany bebe kokoa noho izay azonao atao amin'ny dumbbell satria manana tanana roa amin'ny zavatra raikitra ianao. Izany dia mahatonga azy io ho azo antoka kokoa raha mianatra fanazaran-tena vaovao.
Ny Bar Olimpika dia barbell multigpose azonao ampiasaina amin'ny ascenseur rehetra. Ny Bar dia misy chrome 20 KG, bar 28MM miaraka amina knurl medium sy marika knurl roa. Notsapaina hatramin'ny 220.000 PSI, ny Bar dia mitazona karavasy tsara ho an'ny repoblika marobe nefa afaka miatrika ny enta-mavesatra sy ny fanararaotana fanondranana herinaratra. Ny tanany vita amin'ny friksiôna dia manana vy tsy misy fangarony miaraka amina fantsom-by sy bearings izay manome ny bara hilamina tsy tapaka.
220,000 PSI TENSILE STRENGTH:Titan's Men's 20KG Bar dia vita amin'ny chrome sy vy tsy miova, mamokatra zana-kazo miaraka amin'ny herin'ny 220,000 PSI. Ny zana-kazo tsirairay dia voahodina, nohosorana ary nosedraina tsirairay mba hanome ny karavasy mety na hiondrika amin'ny bara ho an'ny fiakaran'ny Olaimpika.
Marka KNURL DUAL:Ny marika dia manana marika knurl roa ho an'ny fametrahana mora tanana. Ny marika knurl roa dia mamela anao hampiasa ny Bar ho an'ny fampiakarana marobe ary hiala ny fitoeranao.
PAIR miaraka amina andian-tsolika BUMPER: Ny Bar dia mifanentana amin'ireo takelaka olympika mahazatra, ireo bumper voasedra amin'ny ady ireo dia manana loko miloko, mamoaka bouncing maty tsy miovaova ary azo alaina amina lamina manokana.
LOCK-IN:Tehirizo amin'ny takelakao miaraka amin'ny Collars ny takelaka. Ireo kola ireo dia namboarina ho an'ny fitaovana fampiakarana lanja Olaimpika. Izy ireo dia manana tampon-tsolika mora izay manindry ny tanany barbell miaraka amina varingarina. Ny fitazonana ny takelakao amin'ny toerany amin'ny fihodinam-bokotra tsotra.
CONSTRUCTION QUALITY:Ny 20KGBar dia manana zana-kazo Chrome, 28MM misy tanjaka 220,000 PSI. Ny tanany vita amina fikorontanana dia misy vy vita amin'ny vy miaraka amina bushing sy bearings.
Marika: Yolanda Fitness / Karazan-tsolika: Bara olympika / fampiasa amin'ny bar: Multipurpose / Bar: 20KG / Halava ny bar: 2.2M / Grid diameter: 28MM / Loading Diameter: 50MM / Loading Capacity: 200KG / Knurl: Multi Dual Design / Famaranana: Chrome / Bushing na bear: bushing / collars: mpivady
Teo aloha: Tarika booty fanoherana tsy elastika
Manaraka: Non slip slip yoga block
Jump Rope Skipping Rope ho an'ny fampiofanana
Set Iron Settle Kettlebell